Vaovao - Ao ambadiky ny sehatra: ny fifaninanana ifotony amin'i Ashine - ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Momba an'i Ashine
Famerenana amin'ny laoniny ny vato
Ao ambadiky ny sehatra: ny fifaninanana ifotony an'i Ashine - ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa
Tamin'ny 22 Desambra 2020, ny tatitra momba ny drafitry ny asa ho an'ny mpanjifa Ashine dia natomboka ara-potoana.
Ilay valanaretina nihanaka tamin'ny taona 2020 dia nahatonga ny orinasa tsirairay hiatrika fanamby mafy, ary vao mainka mihantsy ny tanjaky ny orinasa, izay tsy ny herin-kery ihany, fa ny tanjaka malefaka ihany koa. Ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia nanao asa betsaka ho an'ny mpanjifa ao ambadiky ny seho, ao anatin'izany:
Ny mpanjifa dia nametraka baiko hividy vokatra amin'ny mpamatsy entana an-trano, saingy tsy nahazo ny entana aorian'ny fandoavana. Na dia voafitaka aza izy ireo ary mitandrina ny mpanamboatra ao an-trano dia mbola manana fahatokisana tsy misy fepetra an'i Ashine ny mpanjifa ary manankina anay hanampy amin'ny fividianana vokatra anatiny.
02 Tsy miverina
Rehefa ilain'ny mpanjifa maika ny vokatra iray, raha tsy ampy ny fitoeram-pandefasana ary tsy voafandrika ny habaka, ny serivisy ho an'ny mpanjifa Ashine dia tsy manisa ny onitra, ary manao izay rehetra azo atao mba hahazoana entana ho an'ny mpanjifa sy hamaha ny filany maika; fikarakarana am-pahatsorana ny mpanjifa mandritra ny valanaretina, maimaimpoana Omeo fitaovana fisorohana valanaretina.
03 Fo am-po
Voakasiky ny valan'aretina, nisondrotra izaitsizy ny vidin'ny entana an-dranomasina. Miorina amin'ny fitsipiky ny fandinihana avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjifa, ny serivisy mpanjifa Ashine dia nanao asa be dia be ho azy, mampitaha ny vidiny sy ny fahaizan'ny logistika maro ary ireo fotokevitra lehibe hafa, ary mahita ny fomba mahomby sy haingana indrindra ho an'ireo mpanjifa hitahiry entana.
04 Ataovy normal ny fiofanana
Nandritra ny valanaretina dia nanohy nampiroborobo ny fiofanana momba ny ekipa mpamokatra sy ny ekipan'ny fanaraha-maso kalitao ny departemantan'ny serivisy ho fanatsarana ny fahatsiarovan-tena ho an'ny mpiasa sy hanatsara ny fifaninanana ao amin'ny orinasa.
05 Serivisy lalindalina
Ny drafitra ho avy ao amin'ny departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia ny manompo hatrany amin'ny mpanjifa lalindalina, mitandrina tsara amin'ny antsipiriany rehetra, ary mampiasa hetsika mba hamoronana fahatsapana fiankinan-doha sy fahatokisan'ny mpanjifa.
2020 dia voatendry ho taona miavaka. Ny kely rehetra nefa lehibe amintsika dia miaina tantara sy vavolom-belona. Amin'ity taona sarotra sy miavaka ity, ny mpiasa tsirairay ao Ashine dia nanaiky ny fanahin'ny fambolena vokatra, ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa lalindalina. Voninahitra lehibe koa izahay ny miara-miasa amin'ny mpanjifa rehetra handany ity taona manokana sy misy dikany ity. Ankehitriny rehefa manomboka mitsonika ny rivotra atsinanana sy ny bibikely manindrona, mino izahay fa ny hoavin'i Ashine dia hanohy hanaraka ny fahatsapana andraikitra ambony sy ny maha-matihanina an'i Ashine, ary hivoatra mialoha, avelao i Ashine ho lasa marika ambony kalitao, ovay tanteraka ny sary tsy dia misy kalitaon'ny vita any Chine, ary lasa mpamatsy hajaina indrindra eto an-tany ny fikosoham-bary sy ny famolavolana fitaovana diamondra!
Fotoana fandefasana: Feb-05-2021
Niorina tamin'ny taona 1993, fitaovana Ashine Diamond dia mpanamboatra mendri-pitokisana ho an'ny fitaovana diamondra, izay hita ao Fujian, Sina, miaraka amin'ny rojo indostrialy tonga lafatra sy feno ho an'ny fitaovana diamondra, ary koa ny rafitra fanaterana mety. ASHINE dia manolo-tena hanamboatra fitaovana diamondra izay tsy vitan'ny hoe sariaka amin'ny tontolo iainana fa tia ny mpampiasa ihany koa.
12D, 88 Xiangyu Road, Xiamen, Fujian, Sina 361006.
Eoropa: + 86-592-5688133
Azia sy Pasifika: + 86-592-5688223
Azia sy Pasifika: ashine-eeu@ashinetools.com
Kiraro fanaovana diamondra, Kiraro fitotoana PCD, Pads polishing vita amin'ny beton, Kiraro fitotoana beton, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra,